Madaxweynaha K/Galbeed Oo Booqday Degmada Wala-weyn Ee Gobalka Shabeellaha Hoose – Goobjoog News
Madaxweynaha K/Galbeed Oo Booqday Degmada Wala-weyn Ee Gobalka Shabeellaha Hoose
Wafdigan uu hogaaminayey Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee maanta gaaray degmada Wala-weyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa soo dhoweyntiisa ka qeyb qaatay Maamulka degmada, Odayaasha,Dhalinyarada iyo Saraakiisha Ciidanka.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wafdigisa ayaa kulan saacado qaatay la yeeshay Mas’uuliyinta degmada, Odayaasha iyo Dhalinyarada, waxayna madaxweynaha la wadaageen tashada ay qabaan dadka deegaanka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed (Lafta gareen) ayaa dhankiisa Sheegey in sida ugu dhow ay wax uga qaban doonaan Cabashooyinka ay so gudbiyeen bulshada reer Walaweyn,waxaana uu sheegey in marna aan raali ka noqonaynin in la dhibaateeyo Shacabka ku nool Deeganadda Shabeellaha Hoose.
Safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli Gobolka Shabeellaha hoose ay ka socoto howlgal lagu ciribtiraayo haraadiga Al-Shabaab,wuxuuna madaxweynaha Koonfur Galbeed shacabka ku dhira geliyay iney ka qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shbaab.
Wafdiga uu hoggaaminaayey Madaxweyne Lafta Gareen waxa Qeyb ka ahaa Wasiirada wasaaradaha Amniga, Dekadaha iyo Xildhibano ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya iyo Kuwa Koonfur Galbeed,wuxuuna ujeedka uu ahaa sidii wax badan looga ogaan lahaa baahiyaha dadka deegaanka ay qabaan.
Madaxweyne Xaaf oo Hadda Gaarey Godinlabe